China Telipressin acetate kuti jekiseni fekitari uye vagadziri | JYMed
Terlipressin Acetate nokuti jekiseni
1mg / chinu Strength
Chiratidzo: Nokuti pakurapa esophageal variceal ropa.
Clinical kushanda: intravenous jekiseni.
Terlipress mu acetate nokusingaperi Pharma 0.2 MG / Rine mamiririta mhinduro kuti jekiseni rine basa chinoita terlipress mu, inova chakaita zvokugadzirwa pituitary kemikari (kemikari iyi kazhinji zvinoberekwa pituitary shwanu inowanikwa muuropi).
Muchapiwa kwamuri jekiseni kuva tsinga.
Terlipress mu acetate nokusingaperi Pharma 0.2 MG / Rine mamiririta mhinduro kuti jekiseni rinoshandiswa nokuda pakurapa:
• ropa kubva dilated (Kuwedzera) mutsinga zvokudya nenyere kunotungamirira dumbu rako (anonzi ropa oesophageal varices).
• chimbichimbi Mabatirwo mhando 1 hepatorenal syndrome (nokukurumidza mberi renal kukundikana) Varwere vane chiropa cirrhosis (scarring chiropa) uye ascites (abdominal norukandwe).
mushonga uyu nguva dzose kwamuri nachiremba kupinda tsinga dzako. Chiremba achasarudza zvikuru zvakakodzera dose iwe mwoyo uye ropa rako kweropa chichange ichi- kuongororwa panguva jekiseni. Ndapota kumbira chiremba wako kuti mamwe mashoko ane chokuita kushandiswa kwayo.
1. Short rokuti kurapa ropa oesophageal varices
Pakutanga 1-2 MG terlipress mu acetate (5-10 ml Terlipress mu acetate nokusingaperi Pharma 0.2 MG / Rine mamiririta mhinduro kuti jekiseni) inopiwa jekiseni kupinda tsinga dzako. dose Your achavaponesa rako muviri uremu.
Pachapera jekiseni, dose yako inogona kuderedzwa 1 MG terlipress mu acetate (5 Rine mamiririta) ose maawa 4 kusvika 6.
2. Type 1 hepatorenal urwere
Zvatinosiita dose 1 MG terlipress mu acetate ose 6 maawa kweinenge 3 days. Kana kuderera kwemitambo serum creatinine idukusa 30% pashure 3 mazuva kurapwa nachiremba wako unofanira kufunga doubling kuti dose 2 MG ose 6 maawa.
Kana pasina mhinduro Terlipress mu acetate nokusingaperi Pharma 0.2 MG / Rine mamiririta mhinduro kuti jekiseni kana varwere Kupindura wakakwana, kurapwa pamwe Terlipress mu acetate nokusingaperi Pharma 0.2 MG / Rine mamiririta mhinduro kuti jekiseni inofanira kumbomiswa.
Kana zvinoderedza serum creatinine kunoonekwa, kurapwa pamwe Terlipress mu acetate nokusingaperi Pharma 0.2 MG / Rine mamiririta mhinduro kuti jekiseni inofanira akaramba kuti vaifanira mazuva 14.
Kana iwe uri pamusoro makore 70. kutaura chiremba wako usati kugamuchira Terlipress mu acetate nokusingaperi Pharma 0.2 MG / Rine mamiririta mhinduro kuti jekiseni.
Shandisa pavarwere vane itsvo matambudziko
Terlipress mu acetate nokusingaperi Pharma 0.2 MG / Rine mamiririta mhinduro kuti jekiseni inofanira kushandiswa nokungwaririra pavarwere vane refu kumira itsvo kukundikana.
Shandisa pavarwere vane chiropa matambudziko
No dose kuchinja chinodiwa varwere chiropa kukundikana.
Shandisa muvana uye kuyaruka
Terlipress mu acetate nokusingaperi Pharma 0.2 MG / Rine mamiririta mhinduro kuti jekiseni hauna pachii kushandiswa mune vana uye kuyaruka nemhaka kukwana ruzivo.
Kushandiswa mushonga uyu chete 2 - 3 Mazuva kuti pfupi rokuti kurapa ropa oesophageal varices uye kuti vaifanira mazuva 14 kuti Mabatirwo mhando 1 hepatorenal urwere, zvichienderana kosi nezvauri.
Previous: Bivalirudin nokuti jekiseni
Next: Desmopressin acetate nokuti jekiseni